Next Article Ndị Ukpor Ewere Oke Ọñụ Mee Ụbọchị Ụkpọr
N'okwu ya na mmemme ahụ, onyeisi nchụaja ògigè ahụ, bụ Maazị Ralph Ndidi Obi kọwàrà na ebumnobi ya bụ emume bụ iji tute mmụọ na uche ndị mmadụ n'ebe Chineke nọ dịka onye kachasị ike na onye kachasị elu.
O mere ka a mara na Chineke na-aza ekpere ọbụla mmadụ jiri obi ọcha wee kpee n'ogige ahụ, ma kpọkuzie ndị mmadụ ka ha kaba ahụ nwee ezi aha, kwụba aka ha ọtọ ma bụrụkwa ndị eziokwu.
N'okwu nke ya, otu n'ime ndị enyi ògìgè ahụ, ma bụrụkwa Eze ọdịnala obodo Ụmụerum dị n'okpuru Ayamelụm, bụ Igwe Mike Udemezue kọwàra mmemme ahụ dịka nke magburu onwe ya, ma dụzie onye ọbụla ka ọ na-asọpụrụ iwu na-achị ogìge ahụ, na-akwàdo ezi omenala e jiri mara ndị Igbo, ma na-atụkwa egwu Chineke n'ozuzuokè, n'ihi na ngọzị na-adịrị onye na-eme ndị etu ahụ.
Na ntụnye nke ya, otu nwa amadi jibụrụ ọkwa n'oge gara aga dịka onyeisi ụlọ mgbasaozi 'Anambra Broadcasting Service' bụ Maazị Ben Ekweọnụ kọwàpụtàrà etu ogigè ahụ na ụlọ ọrụ ahụ si emekọrịta ihe ọnụ kemgbe ụwa, ma kpọkuzie ụlọ mgbasaozi dị iche iche n'ala Igbo ka ha gaa n'ihu ịdị na-akwàlite asụsụ na omenala Igbo. O kpekwazịrị ka Chineke gaa n'ihu ịgọzi ogigè ahụ, ndị òtù ha, onyeisi nchụaja ha bụ Maazị Obi nakwa ndị ọzọ siri ebe dị iche iche wee bịa isonye na ya bụ mmemme.
Mmemme ịgba ọfala ahụ bụ nke weere ọnọdụ mkpụrụ ụbọchị atọ, ma bụrụkwa nke a nọrọ na ya wee gbaa mgba, kpee usoro ekpere dị iche iche, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere ka ya bụ ụbọchị zaa aha a kpọrọ ya.